Fnuap: 94 106 894 Ar hiadiana amin’ny aretina mamany lava | NewsMada
Fnuap: 94 106 894 Ar hiadiana amin’ny aretina mamany lava
Notanterahina tetsy Tanjombato, omaly, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Fnuap sy ny vondron’orinasa Filatex mikasika ny fampiroboroboana ny fanabeazana feno momba ny fananahana ary ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy tratran’ny aretina mamany lava.
Haharitra herintaona ny fiaraha-miasa. Mitentina 94 106 894 Ar ny vola entina hiasana hamongorana ny aretina mamany lava sy hampianarana ireo tanora mikasika ny fananahana.
Tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha-50 taon’ny Fnuap izao fiaraha-miasa eo aminy sy ny Filatex izao.
Eto Madagasikara, mbola fady ho an’ny ankohonana ny firesahana momba ny fananahana. Lohahevitra tokony hiarahan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka midinika mihitsy anefa izy io hahafantaran’ny tanora ny tokony hataony. Manomboka amin’ny fahadiovan’ny fananahana izany hatramin’ny fahasalaman’ny fananahana sy ny maha sarobidy izany taovam-pananahana izany.
Mikasika ny aretina mamany lava, efa misy asa hatao any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy ka manodidina ny 100 ireo vehivavy raisina an-tanana ary efa an-dalam-pahasitranana izy ireo. Entina mamonjy hopitay lehibe ireo marary hahafahana mandidy azy ireo sy manara-maso akaiky ny fahasalamany.
Chumet Tsaralalàna : la méthode 5S-KAizen fait ses preuves 21/01/2020
«Panier garni» : le PRM met fin aux malentendus 21/01/2020
Orientation scolaire et professionnelle des lycéens : deux partenaires du Menetp renouvellent leurs engagements 21/01/2020
Commerçants des rues : «Le retour sur les trottoirs est inenvisageable», dixit la CUA 21/01/2020
Grand amphi Degs : la fête du Printemps se prépare 21/01/2020